China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance – Pandaily
Jan 14, 2022, 20:21ညနေ 2022/01/15 14:02:01 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် China Automotive Power Battery Industryဒီဇင်ဘာ လနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ် နှစ်လုံး အတွက် ပါဝါ ဘက်ထရီ အချက်အလက်များ.
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာ လအထိ တရုတ် ၏လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် စွမ်းအင် ဘက်ထရီ များ ၏စုစုပေါင်း တပ်ဆင် ထားသော စွမ်းရည်သည် ၁၅၄. ၅ GWh ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၄၂. ၈% တိုးလာသည်။ ၎င်းတွင် ternary battery သည် 74.3GWh နှင့် lithium ferrous phosphate battery သည် 79.8GWh ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာ လအထိ တရုတ်နိုင်ငံရှိ စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ ၅၈ ခု သည်သူတို့၏ ထုတ်ကုန်များကို လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ တွင်တပ်ဆင် မည်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အများဆုံး အသုံးပြုသော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ ၁၀ ဦး မှာ Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL), BYD, China Lithium Electric Technology Co., Ltd. (CALB), Gordi Hi-Tech, LG New Energy, SVOLT, Tafeier Energy, EVE Energy, Farasis Energy နှင့် Sunwoda Electronics တို့ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာ လအထိ တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ် မှုသည် ၂ ၁၉. ၇ GWh ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၆၃. ၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ternary battery output သည် ၉၃. ၉ GWh ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှု၏ ၄၂. ၇% ရှိသည်။ လီ သီ ယမ် ferrous ဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ် မှုသည် ၁၂၅. ၄ GWh ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၇. ၁% ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:CATL ၏ ဘက်ထရီ စက်ရုံ အသစ်သည် တက် စ လာ ကိုထောက်ပံ့ သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာ လအထိ တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ရောင်းချ မှုသည် ၁၈၆. ၀ GWh သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၈၂. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ternary ဘက်ထရီ ရောင်းအား သည် ၇၉. ၆ GWh ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၂၈. ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ လီ သီ ယမ် ferrous ဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ ရောင်းအား သည် ၁၀၆. ၀ GWh ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂ ၄၅. ၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။